Ahoana ny fomba hamantarana ny teny fanalahidy mivarotra indrindra ho an'ny lisitra Amazon?
Tsy misy mpitaingina fa ho an'ny vokatra mahomby dia ny mpivarotra iray dia mila manana lisitra mivarotra ny teny fanalahidy ho an'ny lisitry ny amboara Amazon. Rehefa voamarina ny làlana marina dia ireo tolo-dàlana sy dingan-dava tsara ireo dia mety hanampy ny tolotra omena anao eo anoloan'ny mpivarotra mety aminao amin'ny fampiasana fehezanteny misy ifandraisana mba hahitana izay ilainy. Izany no mahatonga ny mety ho ny fomba tokana hanamafisana ny tombam-bidin'ny fandraharahana fidiram-bolanao dia ny fametrahana ny vokatra napetrakao amin'ny vidiny amin'ny karazana fikarohana maro ary noho izany fanontaniana tena sarobidy araka izay tratra - creador de paginas gratis. Saingy misy fomba manerana izao tontolo izao ve ny mametraka ny teny fanalahidy ho an'ny lisitra Amazon toy ny pro? Eny, andeha hojerentsika.
Alohan'ny zavatra hafa, avelao hiatrika izany - ny motera lehibe indrindra (toa an'i Google mihitsy) dia mitady indrindra amin'ny ny fotoana isaky ny fitsidihan'ny mpampiasa, ary koa ny fitarihana amin'ny rindrambaiko amin'ny klioba amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra mendri-kaja amin'ny fanomezana mari-pahaizana manokana ho an'ny pejy Internet rehetra hita ao amin'ny Internet ao anatin'ny fanondroana azy. Na izany aza anefa, ny algorithm 'algorithm an'i Amazon' dia mivezivezy manodidina ny famokarana mivaingana iray mifangaro - ny tahan'ny fifandirana mampiseho tsara (na tsia) ireo mpitsidika dia miova avy amin'ireo mpanjifa mety ho lasa mpividy. Midika izany fa ny fivoaran'ny fivarotana farany anao indrindra sy ny isan'ireo fanamafisana fanamarinana tsara dia raisina amin'ny alàlan'ny algorithm A9 ihany koa ho toy ny singa be loatra.
Hanomboka amin'ny fikarohana lalina amin'ny fikarohana
, ahoana no hahombiazan'ny fikarakarana ny organika tsara kokoa amin'ny SERP Amazon amin'ny fanombohana? Mino aho fa ny olona rehetra mivarotra izany (ary ireo mpivarotra tanora an-tserasera, indrindra moa) dia tokony hanomboka hametraka ny lisitry ny vokatra ankapobeny ho fankasitrahana azy ireo amin'ny A9 ho toy ireo kalitao, azo antoka fa tokony hanehoana amin'ny fitombon'ny isan'ny mpanjifa manakarama Amazon. Ary ity dia afaka manampy anao be dia be. Eritrereto ity lisitra fohy manaraka ity miaraka amina tsipika soso-kevitra tsotra sy soso-kevitra ho anao hamadihana ny votoatin-teny manan-danja ho an'ireo lisitra Amazon anao - ho amin'ny ezaka mahomby sy feno.
Ampifanaraho ny lisitry ny tariby tarihin-dry zareo amin'ny lisitry Amazon
Miezaka mieritreritra ivelan'ny faritra. Tadidio fa ny fomba rehetra hitadiavan'ny mpihazakazaka ny mividy ny entana entinao - dia mety ho lasa ny tenimiafinao maharesy lahatra anao na ny fitambaran-tsakafo lava be.
Aza misalasala manara-maso ny mpitsabo iray indroa mba hahitanao ireo teny filamatra hafa mampanantena anao, ary koa ny teny keyword LSI mifandraika amin'ny vokatrao na sokajinao.
Ataovy azo antoka ny fandinihina ny habetsaky ny fikarohana ho an'ny teny fototra tsirairay alohan'ny hampidirana azy ao amin'ny lisitry ny kandidà mety hahazoana anao. Manoro hevitra aho amin'ny fampiasana fitaovam-pitenenana toy ny Word Merchant na Keyword Inspector mba hanampiana anao hahazo ny tomban'io metric io.
Tadidio fa indraindray dia misy vondrona fikarohana azo atao indraindray na dia amin'ny teny diso aza, ny dikan-teny tsy voafaritra amin'ny endriny manokana sy ny maro, ary koa ny fiovan'ny teny fanalahidy izay midadasika amin'ny lohahevitra iray ihany.